As of Thu, 06 Aug, 2020 22:25
यो देशमा कत्रा–कत्रा काण्ड त त्यत्तिकै सजिलै मिल्छ भने यो ३३ किलोको काण्ड त सानोतिनो कुरा हुने भइगयो ।
केही महिनाअघिदेखि उदुमै मच्चाएको, केही व्यक्तिको हत्या भएको भनिएको, केही व्यक्ति समातिएको भनेर समाचारमा आएको ३३ किलो सुन काण्डका बारेमा हिजोआज कुनै चर्चा भएको पाइँदैन । किन हो किन, यसका बारेमा थोरबहुत जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा रहेको छ । धेरै व्यक्ति समातिँदा पनि उहाँहरूले ठूला मालिकका बारेमा चाहिं नभन्नुभएको हो कि अथवा जति समातिनुभएको छ उहाँहरू नै ठूला मालिक हुनुहुन्छ कि ? सुनिन्छ, कोही त निर्दोषलाई पनि यसमा मुछिएको छ आदि–इत्यादि । सरकारले एउटा अनुसन्धानका लागि यति लामो समय लगाउँदा पनि यथार्थ के थियो भनेर बताउन किन ढिला गरेको हो ? कि भन्नै नहुने रहस्य पत्ता लाग्यो र ? ए, त्यसो भए भन्नु पर्दैन । हामी जनता त्यसै बिर्सिदिन्छौं । हामी जनतालाई कुनै एउटा घटना भएको मितिले जेनतेन एक–दुई हप्ता बितेपछि कहिल्यै चासो हुँदैन । अचम्मका सहनशील जनता हामी नमुना नै हौं नि ।
विगतमा पनि सुन्ने गरिएका अनेकौं सुनकाण्ड त्यत्तिकै मजाले सजिलैसँग पच्दै आएको हुनाले यस पटक पनि त्यसै गरी काम कुरा मिल्छ होला । ती सेते भाइले पनि यस पटकचाहिं अलि दुःख पाए क्या । सधँै सजिलै हुने गरेको कामलाई कुन अर्को भाइले बीच बाटोमै ल्याङ गरिदिएकाले अलि अप्ठेरो बनाइदिएछ । त्यो सेते भाइलाई पनि मर्का नपर्ने गरेर कारबाही अगाडि बढिरहेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले सेते भाइ, त्यसमा क–कसको संलग्नता छ ? त्योचाहिं नभन है, फेरि ठूला मालिकको दनक भेटौला ।
हामी जनताले त बिर्सिसक्यौं, तिमी ढुक्क भए हुन्छ । अब छानबिन टोलीले पनि बिर्सन्छन् र त्यो अदालतले सबै कामकुरो अगाडि बढाएको छ भनेर जनतालाई भनिदिए भैहाल्यो नि । यो देशमा कत्रा–कत्रा काण्ड त त्यत्तिकै सजिलै मिल्छ भने यो ३३ किलोको काण्ड त सानोतिनो कुरा हुने भइगयो ।
सेते भाइ, तिमी त्यताबाट निस्किएपछि पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्छौ होला नि । सुनका डल्लाचाहिं दुबईतिरको आफ्नै खानीबाट निःशुल्कमा ल्याउने हो ? विश्वभरि नै सुन र डलरको मूल्य हरेक दिन फरक पर्ने हुँदा त्यो दिनको कति मूल्य छ भनेर दैनिक प्रकाशन हुन्छ । अनि कसरी कति नाफा हुने भएर त्यति धेरै जनाले मिलेर खाने रहेछन् भन्या । लगानी नै नपरे जसरी एकपटक सुन छिराउँदा गतिलै रकम हात पर्ने कस्तो सजिलो व्यवसाय रहेछ यो ! अवैध धनलाई वैधता दिनका लागि सीधै विमानस्थलको चोरबाटोबाट झिकाउनुपर्ने हो यो सामानचाहिं ? यो सबै सेते भाइलाई थाहा छ होला, उनले भविष्यमा यसका बारेमा खुलाइदिन्छन् कि ?
हेर सेते भाइ, हामी नेपाली जनतालाई कसैले साँचो कुरा भन्दैनन् तर तिमीले चाहिं कुनै दिन पक्कै सही कुरा बताउनेछौ । यस पटकको ३३ किलो सुन काण्डको त हामीलाई केही दिन विभिन्न मिडियामार्फत सुन्ने अवसर मिलाइदियौ । छानबिनमा तल्लीन सरकारले पनि अनुभूति हुने गरी यो काण्डका बारेमा प्रस्ट पारिदिए हुन्थ्यो, तर तपाईंहरूलाई पनि सबै भन्न गाह्रो छ होला । जागिर खाने अवधि अझै लामै छ होला । ठूला मालिक को–को हुनुहुँदो रहेछ र साना मालिकहरू को–को हुनुहुँदो रहेछ ? जान्न निकै उत्सुक भएकाले यति कुरा राखें ।